Argentina, Kolombiya, Namibia iyo Peru, waa in aanay lahayn xayiraad socdaal
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Argentina, Kolombiya, Namibia iyo Peru, waa in aanay lahayn xayiraad socdaal
Ka dib dib u eegis hoos yimaada talada ku saabsan qaadista tartiib tartiib ah ee xayiraadaha ku meel gaarka ah ee socdaalka aan muhiimka ahayn ee EU, Goluhu wuxuu cusbooneysiiyay liiska wadamada, gobollada maamulka gaarka ah iyo hay'adaha kale iyo maamulada dhulalka kuwaas oo xayiraadaha safarka la qaado. Gaar ahaan, Argentina, Colombia, Namibia iyo Peru ayaa lagu daray liiska.
Socdaalka aan muhiimka ahayn ee EU-da ee wadamada ama hay'adaha aan ku qornayn lifaaqa I waxay saaran tahay xayiraad ku meel gaar ah. Tani waa iyada oo aan wax dhib ah loo geysan suurtagalnimada in dalalka xubnaha ka ah ay qaadaan xannibaadda ku-meel-gaarka ah ee socdaalka aan muhiimka ahayn ee Midowga Yurub ee socotada si buuxda loo tallaalay.
Sida ku qeexan talada Koonsalka, liiskan waxa lagu sii wadi doonaa in dib loo eego labadii toddobaadba mar iyo, sida ay xaaladdu tahay, waa la cusboonaysiin doonaa.
Iyada oo ku saleysan shuruudaha iyo shuruudaha lagu dejiyay talada, laga bilaabo 28ka Oktoobar 2021 dowladaha xubnaha ka ah waa in ay si tartiib tartiib ah u qaadaan xannibaadaha safarka ee xuduudaha dibedda ee deganeyaasha dalalka saddexaad ee soo socda:
Shiinaha, iyada oo ku xidhan xaqiijinta isdhaafsiga
Xayiraadaha safarka waa in sidoo kale si tartiib tartiib ah loogu qaadaa gobollada maamulka gaarka ah ee Shiinaha Hong Kong iyo Macao.
Marka la eego qaybta hay'adaha iyo maamulada dhuleed ee aan loo aqoonsanayn inay yihiin dawlado ugu yaraan hal waddan oo xubin ka ah, xayiraadaha safarka ee Taiwan sidoo kale waa in si tartiib tartiib ah loo qaadaa.
Deganeyaasha Andorra, Monaco, San Marino iyo Vatican -ka waa in loo tixgaliyaa inay yihiin deganeyaasha EU ujeedada taladan.
Shuruudaha lagu go'aaminayo dalalka saddexaad ee xayiraadda socdaalka hadda la qaadayo ayaa la cusbooneysiiyay 20ka Meey 2021. Waxay daboolayaan xaaladda cudurrada faafa iyo guud ahaan jawaabta COVID-19, iyo sidoo kale isku halaynta xogta la hayo iyo ilaha xogta. Isdhaafsiga waa in sidoo kale lagu tixgaliyaa kiis-kiis.
Dalalka la xiriira Schengen (Iceland, Lichtenstein, Norway, Switzerland) ayaa iyaguna ka qayb qaata talooyinkaan.